Miaraha dia amin'ny hendry
"Miaraha dia amin'ny hendry dia ho hendry; fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidiran-doza" - Ohab. 13:20.
Hatrany amin'ireo taona voalohany dia efa ilaina indrindra ny mampiditra ny fahatokiana hentitra ao anatin'ireo fitsipika iorenan'ny toetra. Amin'izany no hanatraran'ny tanora ny fetra ambony indrindran'ny maha-lehilahy sy vehivavy Iehibe azy (...) Tokony handinika tsara ny zava-kendreny eo amin'ny fiainana sy ny asa hataony rahatrizay ny tanora ka hametraka ny fanorenana mba tsy ho voapentin'ny tsy fahatokiana ny fahazarany rehetra. Raba ho eo amin'ny toerana tsy maintsy hitaomany ny hafa izy, dia tokony ho malina tsara (...) Afaka mandray lesona avy amin'ny lilia isika. Na dia misy hery miasa mangina aza mantsy avy amin'ny manodidina antsika rehetra, izay mety hanimba ny fitondran-tenantsika sy handrendrika ny fanahintsika, dia azontsika atao tsara ny mandà tsy ho tonga amin'izany. Hametraka ny tenantsika ho eo amin'izay tsy hahazoan'ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fontsika isika. Tokony hikatsaka ny fikambanana amin'ireo izay mitolona mafy mba ho any an-danitra amin'ny famindra tsy miovaova ny tanora tsirairay avy. — YI, 05 Janoary 1893.
Diniho ny fonao, zahao ny alehanao. Hevero tsara ny namana iarahanao. Moa ve ny hiara-dalana amin'ny hendry no katsahinao sa ny sakaiza eo amin'izao tontolo izao no fidinao, dia namana tsy matahotra an'Andriamanitra sy tsy mankatò ny filazantsara? — ST, 07 Desambra 1882.
Ny hany fiarovana ho an'ny ankizy sy ny tanora dia ny fitiavana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra. Aoka ireo izay hita ho mampirisika amin'ny zava-kendrena mahasoa, ny fahazarana feno filaminana ary ny fahitsian-toetra no safidina ho namana. Aoka ireo izay mampihatra ny fahamarinan'ny Baiboly sy mandeha araka ny fahazavana mamiratra eo amin'ny lalany no hatao namana. YI, 08 Janoary 1894.
Raha tianao ny hanana fijery mivelatra, fisainana sy faniriana ambony, dia ny namana manohana ny fitsipi-piainana mahasoa no fidio. Aoka ny eritreritra sy ny zava-kendrena rehetra hirona any amin'ny fitsinjovana sahady ny fiainan-ko avy miaraka amin'ny fahasambarana maharitra mandrakizay. — YI, 08 Oktobra 1896.